Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny vehivavy Thailandey dia maty ora maro taorian'ny vaksinin'ny COVID-19
Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Vehivavy Thailandey maty taorian'ny vaksinin'ny COVID-19
Vehivavy 46 taona tany Bangkok, Thailand, maty ny 8 Jona 2021, taorian'ny nahazoana vaksiny ny vaksinin'ny COVID-19 novolavolain'i AstraZeneca ora vitsy talohan'izay.
Ny tompon'andraikitra dia manadihady ny antony nahafaty ilay vehivavy satria tao anatin'ny andro fanaovana vaksiny ihany no nitrangan'izany.
Tao anatin'ny 23 ora teo ho eo dia sempotra izy, voan'ny haintona, very mpifaninana, ary maty.
Ny biraom-pirenena misahana ny fahasalamana dia manolotra fanampiana ho an'ny fianakavian'ilay vehivavy maty.
Ny vehivavy dia nahazo ny fatra voalohany tamin'ny vaksininy tao amin'ny toeram-pitsaboana tao amin'ny Thai Business Administration Technological College any distrikan'i Bang Khen, iray amin'ireo distrika 50 any Bangkok, Thailand, tamin'ny 11:45 alina tamin'ny 8 Jona 2021.
Rehefa avy nody izy dia voan'ny tazo sy narary andoha ary nahatsiaro mangatsiaka. Fanafody fanaintainana 3 no nalainy. Tamin'ny 10 ora sy sasany alina dia sempotra izy, voan'ny haza, ary maty. Niantso fiara mpamonjy voina ny havana, ary maty tsy tra-drano.
Ny sekretera jeneralin'ny biraom-pirenena misahana ny fahasalamana (NHSO), Dr. Jadej Thammatach-aree, dia nilaza fa naniraka ny mpiasany izy mba hanolotra fanampiana voalohany avy hatrany nefa tsy hiandry ny famaranana momba ny fahafatesan'ny vaksinina na tsia. Ny fanampiana voalohany dia natao hanampiana ny olona traboina, hoy izy.